Keyu Zhanye ပစ္စည်းကိရိယာ & Technology မှ Co. , Ltd - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
ငါတို့သည်ဤလောက 1995 ကတည်းကကြီးထွားလာကူညီ
အီးမေးလ်ပို့ရန်ပံ့ပိုးမှု အီးမေးလ်: alcohol@keyualcohol.com
အီးမေးလ်ပို့ရန်ပံ့ပိုးမှု အီးမေးလ်: ethanol@keyualcohol.com
အီးမေးလ်ပို့ရန်ပံ့ပိုးမှု အီးမေးလ်: sale@keyualcohol.com
non-ချက်ပြုတ် & Non-saccharification နည်းပညာနှင့်အတူအရက်ထုတ်လုပ်ရေး
အရည်အတွက် CO2 ၏ပြီးပြည့်စုံသောစက်ရုံ
frame က filter ကို
လိမ် heat exchanger
တုဗလ heat exchanger
Jinan Keyu Zhanye နည်းပညာ & ပစ္စည်း Co. , Ltd မှ။
Jinan Keyu Zhanye ပစ္စည်းကိရိယာ & Technology မှ Co. , Ltd မှတစ်ဦးမွငျ့မား & နည်းပညာအသစ်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရှန်ဒေါင်းအလင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတက္ကသိုလ် & ရှန်ဒေါင်းကစော်ဖောက်ခြင်းဒီဇိုင်းအင်စတီကျုနှင့်အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးအုပ်စုတစ်စု၏ပါမောက္ခအကြံပေး, ကျွမ်းကျင်သူများကတည်ထောင်ထားသည်။ သူတို့ကအရက်နှင့် CO2 ၏နယ်ပယ်များတွင်ကြုံတွေ့နေကြသည်။ အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ 50000 M2 ယူထားသော။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်များ၏နိုင်ငံရေး, စီးပွားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာသောလှပသောစမ်းမြို့ Jinan, တွင်တည်ရှိသည်။
1995 ခုနှစ်မှစ. Keyu ကုမ္ပဏီဒီဇိုင်း, ဆောက်လုပ်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအများအပြား distilleries, အီသနော manufactories နှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင်ဓာတုစက်ရုံများများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သည်။
Keyu ကုမ္ပဏီတစ်ခု 100,000T / Y ကိုဒဏ်ငွေအရည်အသွေးကိုစားသုံးနိုင်သောအရက်စီမံကိန်း 15,000T / Y ကို acetic acid ကိုစီမံကိန်း 10,000T / Y ကို CO2 စီမံကိန်းနှင့်ပါကစ္စတန်ရှိအရက်စွန့်ပစ်ရေကုသမှုစီမံကိန်းအတွက်ဒီဇိုင်း, ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုပါသည်။ ကျနော်တို့အောင်မြင်သောပြီးစီးခဲ့ 60,000 T က / Y ကိုလောင်စာအီသနောစီမံကိန်းနှင့်ရုရှားတွင် 30000 T က / Y ကိုပရိုတိန်း feed ကို (DDG) စီမံကိန်းကိုရှိသည်။ ငါတို့သည်လည်းအမေရိကန်ဖောက်သည်များအတွက်ထူးခြှနျအရက်နှင့်ဆက်စပ်စီမံကိန်းများဒီဇိုင်းနှင့်တည်ဆောက်။ ထူးမြတ်သောအရောင်အအရည်အသွေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအလွန်အမင်းနိုင်ငံခြား client များသဖြင့်ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။
အမြဲတမ်းပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအားအောက်ပါစီမံကိန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖို့ "စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ဖောက်သည်အစေခံ" အပေါ်အခြေခံပြီး Keyu ကုမ္ပဏီ။
A. အ 3,000-500,000T / Y ကိုဒဏ်ငွေအရည်အသွေးအယ်လ်ကိုဟော (GB10343-2008) အတွက်ခြုံငုံဒီဇိုင်း, ဆောက်လုပ်ရေးသို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ရန်။
ခ 1,500-300,000T / Y ကိုအကြွင်းမဲ့အာဏာအီသနော (Molecular ဆန်ခါအိပ်ရာနည်းလမ်း) ၏ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်။
C. ဒီဇိုင်းနှင့် distilleries / အီသနောစက်ရုံများအတွက်ဒဏ်ငွေအရည်အသွေးအစားအစာတန်း CO2 ပြန်လည် & ထုတ်လုပ်ဘို့ကိရိယာများသည်။ GB10621-2006 ၏စံရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ဃထောက်ပံ့ရေးပြည့်စုံနည်းပညာ (ကမ္ဘာပေါ်မှာအဆင့်မြင့်နည်းပညာ) နှင့်ပစ္စည်းအဖြစ်ပြောင်းနှင့်ဂျုံသုံးကြောင်း distilleries / အီသနောစက်ရုံ granuleprotein feed ကို (DDGS) ထုတ်လုပ်ရန်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ဆောင်မှု။
အီးတရုတ်အနေနဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြစ်သည့် "သုည vinasse ဖျက်ထုတ်နေ" technique ကို, ပေးရန်။
အက်ဖ် (GB18918-2002) "စံအားကုန်ပေါင်းစည်းရေဆိုး" ဟုဖြည့်ဆည်းဖို့ညှစ်ရေဆိုးကို enable, နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အရည် vinasses ဆက်ဆံဖို့ distilleries / အီသနောစက်ရုံများအတွက်နည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများပေးပါ။
G. အဒီဇိုင်းနှင့်ရေချွေတာရေးစီမံကိန်းများအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်များနှင့်တဦးတည်းတစ်တန်အရက်ထုတ်လုပ်ဘို့ 20m3 ဖို့ရေသုံးစွဲမှုလျော့ကျသွားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ high-နည်းပညာအသစ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများထောက်ပံ့ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပေးမသာ။ နည်းပညာဆိုင်ရာသင်တန်းနှင့်မြေတပြင်လုံး-ဘဝနည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာစီမံကိန်းပြီးပါကပြီးနောက်ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်နည်းပညာ, ထိပ်ဆုံးအဆင့်ကိရိယာများ, ထိပ်ဆုံးအဆင့်အကြွေးရပ်တည်မှုနှင့်ထိပ်တန်းအဆင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူဖောက်သည်ကျေနပ်မှုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
Jinan Keyu Zhanye ပစ္စည်းကိရိယာ & Technology မှ Co. , Ltd မှတစ်ဦးမွငျ့မား & နည်းပညာအသစ် enterprise.It ရှန်ဒေါင်းအလင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတက္ကသိုလ် & ရှန်ဒေါင်းကစော်ဖောက်ခြင်းဒီဇိုင်းအင်စတီကျု၏ပါမောက္ခအကြံပေး, ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးအုပ်စုတစ်စုကတည်ထောင်ဖြစ်ပါတယ်။